Android Auto ကမှုန်ဝါးဝါးပြသနေတဲ့ ပြဿနာကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google! – AsiaApps
Android Auto ကမှုန်ဝါးဝါးပြသနေတဲ့ ပြဿနာကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google!
January 19, 2018 January 19, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Android Auto ကမှုန်ဝါးဝါးပြသနေတဲ့ ပြဿနာကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google!
Android Auto မှာ မှုန်ဝါးဝါးကြီးပြနေတဲ့ အကြောင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ် တည်းက Customer တွေအနေနဲ့ google ကို report တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Android Auto အဖွဲ့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဉီးက သုံးစွဲသူတွေကို အမြန်ဆုံးကောင်းလာအောင် Android OS အဖွဲ့နဲပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အခုထိတော့ဘာမှထူးခြားလာတာမရှိသေးပါဘူး။ အောက်ကပုံကတော့ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ရဲ့ report ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Google employee’s reply for users
Android Auto ရဲ့ display error ဟာ ကား model မရွေးဖြစ်နေတာပါ။ Report တင်ကြတဲ့လူတွေကဖုန်း brand အမျိုးမျိုးကိုင်ကြပေမယ့် အများစုကတော့ Oreo version ဖြစ်တဲ့ Pixel ဖုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Android Oreo version ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့တော့ထင်မိတာပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ကတော့ Anroid Auto display error ကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ ဘာကြောင့် Error ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရဉီးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
? Read More, Click the Link below ?https://t.co/HTFus7zPsW pic.twitter.com/nz5lAMSPJx
— Android News (@ndrdnws) January 19, 2018
Grammar မှန်မှန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတွေ ရေးနိုင်မယ့် Grammarly Keyboard — Type with confidence